MY REMEMBRANCE: နာရီလေးများနဲ့ ကျတော်
Posted by puluque at Friday, September 18, 2009
နာရီတဲ့ ကျနော်တော့ နာနာနဲ့ ရီရတဲ့နာရီလို့ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သွားမြင်မိတယ်။ အေးပေါ့ဗျာ ကျနော်တော့ နာရီတွေ မပတ်မိတာတောင်ကြာနေခဲ့ပြီ။ တဆိတ်ရှိ ဖုံးလေးပဲ ပြေးကြည့်နေမိတော့ နာရီကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ရေးစရာရှိတဲ့သူတွေ ရေးနိုင်ကြပါပေတယ်ဗျာ :P
ချစ်သော နာရီလေးနဲ့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ဆုံဆည်းနိုင်ပါစေရှင်။
ဘာရေးထားတာလဲ။ အစကနေ ပြန်ရှင်းပြပါဦး။
မမလည်း သိတ်နားမလည်ဘူး ညီမလေးရီတာရေ.း)
လူအကြောင်းရေးခိုင်းတာ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့ နာရီ
နားတော့ မရှုတ်ဖူးပုလုကွေးရေ.. မျက်စိရှုတ်သွားတာ.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွာသားထက်တော့ တော်ပါတယ်။
ရွာသားက သူများတွေကိုတော့ အားရပါးရတက်ဂ်ပြီး
လုံးဝ မကျေနပ်နေတာ အခုအထိပဲ..ပြောလိုက်.
ဒါနဲ့ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် သိတ်လုပ်မနေနဲ့နော်..ငယ်က
ချောချောလေး..သူများနောက်ပါသွားမှ စောစောက မပြောလိုက်ရဘူး ဆိုပြီး တစ်သက်လုံးနောင်တရနေမယ်
အဆင်ပြေစွာရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ ပုလုကွေးရေ။
မြန်မြန်စွံပါစေ။ ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်တွဲပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
နာရီလား ဟင်င်င် ???
ဆရာ ဆရာ ဆရာ
I miss YIT, or YTU. I am 95 batch :(
ပေးတဲ့သူက အချိန်တိုင်း သတိရနေအောင် နာရီလေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ် ထင်ပါရဲ့း) အစားထိုးမရတဲ့ နာရီလေးနဲ့ပဲ ဆုံဆည်းပြီး ထာဝရ အတူရှိနိုင်ပါစေ မောင်လေး ပုလုကွေးရေ...
ဒါမှမဟုတ် အမကပဲ နားမလည်တာလား ပြန်ဖတ်လိုက်အုန်းမယ် နာလည်အောင်လို့
Hee Hee....I see , saya Ko Hynn Maung, Gold hand chain gyi ......see dar....:D